Banooni.com - Hoyga Cayaaraha WARBIXIN: Mourinho oo noqday tababaraha ugu mushaarka badan caalamka 3/20/2012 9:28:00 A
Warbixin ay soo saartay Majalada kasoo baxdo dalka Faransiiska ee France Football ayaa muujisay in tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho uu yahay macalinka ugu mushaarka badan caalamka.
Tababarihi hore ee kooxaha Inter Milan iyo Chelsea ayaa sanadkiiba qaata lacag dhan €14.8 million, iyadoo laba ka mid ah tababarayaashi uga danbeeyey kooxda Chelsea ay iyana ku jiraan liiska 10-ka macalin ee ugu gunada badan.
Carlo Ancelotti ayaa ku jira booska labaad isaga oo haatan ka qaata kooxda uu maamulo ee Paris Saint-Germain oo siisa €13.5m sanad walba, halka Guus Hiddink uu yahay ninka shanaad ee ugu mushaarka badan isla markaana ka qaata kooxda Anzhi Makhachkala €8.6m sanad walba.
Barcelona ayaa dhorki sano ee lasoo dhaafay aad uga guulo badneyd kooxda Real Madrid laakin tababarahooda Pep Guardiola ma helo mushaarka uu qaato Mourinho, isaga oo kaalinta sadexaad kaga jira liiska tababarayaasha ugu mushaarka badan, waxana uu qaataa €9.5m.
Afar ka mid ah macalimiinta kooxaha Ingiriiska ka ciyaara ayaa liiska soo galay, ninka ugu mushaarka badanna waa tababataha Arsenal Arsene Wenger oo qaata sanadkiiba €9m inkastoo oo uu mudo todbo sano ah qaadin wax koob ah.
Macalinka Manchester City Roberto Mancini oo haatan isku dayaya inuu soo qabto kooxda Manchester United, ayaa kaga danbeeya xaga mushaarka tababare Sir Alex Ferguson xaga mushaarka isaga oo hela Manicini €5.9m halka Ferguson akoonkiisa ku dhacdo sanadkiiba €8m.
Macalinki dhawaan iska casilay xilka tababaranimo ee England boss Fabio Capello ayaa qaadan jiray mudadi uu la joogay xulka Ingiriiska €8.5m.
Labada macalin ee kale ee ku jira 10-ka tababare ee ugu mushaarka badan caalamka waxa ay kala yihiin Dick Advocaat oo leyliyo xulka Russia Waxa sandki uu duubtaa mushaar dhan €7m halka tababaraha kooxda Qaranka dalka China Jose Antonio Camacho uu sanadkiiba qaato €6.1m.
Waa kan liiska tababarayaasha ugu mushaarka badan caalamka: Jose Mourinho (Real Madrid)
Guus Hiddink (Anzhi)
Fabio Capello (Ex-England)
Jose Camacho (China)